Momba anay - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2016 izay ahitana vondrona teknisianina sy varotra manana traikefa manankarena amin'ny fiampangana tsy misy tariby finday. Ireo teknisianina, izay manana traikefa 15 ~ 20 taona amin'ny fitantanana ny famokarana, ny tetik'asa fanovana ny teknolojia ary ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fiampangana tsy misy tariby, dia avy amin'ny Foxconn, Huawei ary orinasa malaza hafa. Mamolavola, manamboatra, mamatsy ary mivarotra fitaovana famandrihana tsy misy tariby mora vidy ho an'ny finday, écouteur TWS ary famantaranandro marani-tsaina izahay, ary manome vahaolana famandrihana tsy misy tariby matihanina. Mpikambana ao amin'ny WPC sy Apple isika izao ary mifanaraka amin'ny fenitra Qi ny vokatray rehetra.
Efa nandalo ny CE, ISO9001, ISO14001, FCC, MFI, BSCI taratasy fanamarinana. Mpikambana ao amin'ny QI sy USB-IF ihany koa izahay.
Ny "Made In China" no sehatra B2B anay nanomboka ny taona 2020. Nandalo ny fanaraha-maso ny orinasa nataon'ny "Made In China".
Ny tanjonay dia ny ho lasa "Mpanamboatra intelligent" kilasy voalohany amin'ny rojo famatsiana herinaratra amin'ny vokatra elektronika finday, miezaka ny mikaroka ny teknolojia avo indrindra isan-taona izahay. Afaka manao serivisy OEM sy ODM lalina ho an'ny mpanjifanay sarobidy izahay ary azo antoka fa hanome lanja bebe kokoa ho an'ny mpiara-miasa.
Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana haingana, ny raharaham-barotra dia nitarina amin'ny tsena iraisam-pirenena isan-karazany, toy ny tanibe Shina, Japon, Korea Atsimo, Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo Atsinanana, Eoropa, Etazonia sy ny faritra hafa. Mirary fiaraha-miasa tsara aminareo mpanjifa hajaina izahay.
Teknolojia sy vokatra
Karazana vokatra: Pad, fijoroana, fametrahana fiara, 2 in 1, 3 in 1, composite multifunctional ary fepetra PCBA tsirairay
Famandrihana fitaovana fanohanana: SmartphoneS, écouteur TWS, famantaranandro maranitra, sns
Fomba fiampangana: Wireless / Inductive / tsy misy tariby
●Hetsika tamin'ny taona 2016
▪ R&D amin'ny charger finday tsy misy finday
●Hetsika tamin'ny taona 2017
▪ Lasa mpikambana voalohany tao amin'ny Fikambanana WPC Qi
●Hetsika tamin'ny taona 2018
▪ Nandefa charger tsy misy finday ho an'ny fiara eny an-tsena ary nanangana atrikasa fivoriambe iray manontolo, izay mampitombo ny fahaiza-mamokatra sy ny fahafahan'ny OEM.
● Events tamin'ny 2019
▪ Famandrihana tsy misy finday haingana ny protocole EPP napetraka eny an-tsena
▪ Taratasy ISO9001
● Hetsika amin'ny 2020
▪ Aoka ho mpikambana Apple
▪ Ny mari-pankasitrahana MFI dia azo sy nojerena ho an'ny charger Apple watch (iwatch) avy amin'ny orinasa Apple
Ny mpiara-manorina ny orinasa Mr.Peng sy Mr. Li sns, dia manana traikefa ara-teorika sy azo ampiharina mihoatra ny 15 taona eo amin'ny sehatry ny elektronika finday. Fantatr'izy ireo tsara fa ny teknolojia famandrihana tsy misy tariby dia ho fepetra ilaina amin'ny fiainan'ny olona ary hanangana ekipa hamolavola sy hamokatra azy ireo. Taorian'ny fivelaran'ny dimy taona mahery, lasa mpikambana WPC sy mpikambana Apple izahay, nitombo ho orinasa matanjaka sy mirefy amin'ny indostrian'ny fiampangana tsy misy tariby.
Miaraka amin'ny fivoarana bebe kokoa amin'ny teknolojia famandrihana tsy misy tariby, ny vokatra charger tsy misy tariby dia hiditra ao amin'ny fianakaviana sy ny sehatry ny asa. Hiezaka izahay hanolotra vokatra sy vahaolana tsara kokoa ho an'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miasa. Ary bebe kokoa hanatsara ny sandanao.